Fetin’ny Paska : Nanaporofo ny fihatsaran’ny fari-piainana ny fahafahan’ny malagasy niala voly -
AccueilSongandinaFetin’ny Paska : Nanaporofo ny fihatsaran’ny fari-piainana ny fahafahan’ny malagasy niala voly
Fetin’ny Paska : Nanaporofo ny fihatsaran’ny fari-piainana ny fahafahan’ny malagasy niala voly
03/04/2018 admintriatra Songandina 0
Toa ny tsy nisy olona intsony tany an-tokantrano. Rakotra ary feno olona ireo toeram-pialamboly samihafa nandritra ny faran’ny herinandron’ny Paska iny. Nanaporofo ny fihatsaran’ny fari-piainana ny fahafahan’ny malagasy niala voly toa ireny. Maro tamin’ny andron’ny alatsinain’ny Paska ireo nisafidy ny hisintaka ny renivohitra, naka rivotra kely sy miala amin’ny mahazatra. Saika nitohana avokoa ny maraina ireo lalana mivoaka ny renivohitra noho ny fahamaroan’ireo mpitsangatsangana. Maromaro noho izany ireo fiara fitateram-bahoaka no nisy naka manokana mba hitondra ny fianakaviana mitsangatsangana. Tetsy ankilan’izay, nahasarika fianakaviana maro ary nilaharana ny fidirana tamin’ireo toerana fitsangatsanganana teto an-drenivohitra raha tsy hilaza afa-tsy ny zaridainan’Ambohijatovo, ny tetsy Masay ary ny teny Tsimbazaza. Vao maraina dia efa nilaharana ny fidirana tamin’ireo toerana ireo. Misaritaka ireo fianakaviana miaraka amin’ny harona misy ny sakafo antoandro. « Manararaotra kely ilay andro tsy fiasana toa izao mba hanomezana fahafaham-po ny ankizy. Sady miala voly no mampahafantatra ny ankizy ireo harenantsika eo amin’ny biby sy ny zava-maniry », araka ny fanamarihan’i Solofo R., raim-pianakaviana nitondra ny ankohonany teny Tsimbazaza. « Sady akaiky eto no tsy dia mandany vola firy », hoy ihany izy.
Tamin’ny ankapobeny, dia saika efa niomana amin’ny fiatrehana ny fetin’ny Paska ny isan-tokantrano. « Efa safidy niarahana ny eto amin’ny Masay. Tsy te hanova fandaharam-potoana intsony, dia aleo milahatra miandry ny anjara », hoy indray Sahobitiana Rasoanjanahary, nitondra ireo zanany mianadahy tetsy Masay. « Ankoatra ny fidirana dia efa nanomana iray alina Ariary isaka ny ankizy aho hitondrana azy ireo amin’ireo lalao samihafa », hoy hatrany ny fanazavany.
Tetsy ankilan’izay, saika nahazo olona avokoa ireo hetsika sy fampisehoana samihafa nanamarihana ny alatsinain’ny Paska, na ny teto an-drenivohitra na tany amin’ireo manodidina. Ankoatra ny vidim-pidirana izay nanomboka amin’ny 4000 Ar, dia maro tamin’ny mpijery no nisafidy ihany koa nisakafo teny an-toerana. Afa-po tamin’ny varotra nataony ireo mpivarotra, ary maro ireo tsy naharaka fa lany aloha tsy araka ny noeritreretina ny entana. Nahazo mpijery avokoa na ny tetsy Antsahamanitra, ny Kianja annexe Mahamasina, ny kianjan’i Maki, ny Coliséum, ny kianjaben’ny CCesca Antanimena, ny teny amin’ny Club Nautique Ivato…
Fa toerana ahitana mpiala voly maro ihany koa rehefa fetin’ny Paska toa izao ny tanànan’Antsirabe. Maro ireo orinasa goavana no mikarakara hetsika tany an-toerana, ka anisan’izany ny trano heva sy fampisehoana niarahana tamin’ny Soredim, ary ny Star Tour niarahana tamin’ny orinasa Star sy mpanakanto maro nandritra ny 3 andro. Toa izany koa ny tanànan’i Mahajanga, Foulpointe…
Fotoana mahatsara ny tsenan’ny mpanakanto ihany koa ny alatsinain’ny Paska toa izao. Misy ireo mpanakanto mahavita manolotra fampisehoana telo na efatra mandritra ny iray andro.
Betsaka ireo nisafidy tsy handeha lavitra
Rehefa ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny Paska ohatra izao dia maro ireo dokam-barotra miantso ny mponin’Antananarivo sy ny manodidina ho atsy na ho ary. Na dia teo aza anefa izany, dia betsaka ireo nisafidy ny tsy nandeha lavitra fa namonjy ireo toerana manan-tantara toa ny valan-javaboarin’ny Tsimbazaza, sy ny toerana fitsangatsanganana vaovao eny amin’ny zaridaina Anosy. Ireto toerana ireto izay anisan’ny toeram-pialamboly mampiray ireo mpinamana na ny mpianakavy ny fiarahana mitsangatsangana, indrindra moa ny valan-javaboary Tsimbazaza, amin’ny fijerena ireo biby manamarika an’i Madagasikara, miaraka amin’ireo ankizy kely. Fantatra moa fa isan’ny nahasarika ireo olona ho any amin’ireo toerana ireo ny fahasarotan’ny fakana taksibe rehefa hariva ny andro. “Tsy nisafidy nijery fampisehoana izahay noho ny fahasarotan’ny fakana taksibe rehefa mody, ka naleonay namonjy ity zaridaina vaovao eto Anosy ity, nitondra ireo ankizy. Sady izahay tsy mipetraka lavitra eto”, hoy i Robertine, renim-pianakaviana. Toraka izany ihany koa, Mihaja, raim-pianakaviana ity, “naleoko nitondra ny ankizy nijery biby fa sarotra be ny fitadiavana taksibe rehefa hody ny hariva iny. Sady efa mahazatra anay ny mamonjy itony karazana valan-javaboary itony rehefa fety ny andro, eny na rehefa fotoan’ny fialan-tsasatra aza.” Mahakasika izay taksibe izay indrindra, dia fantatra fa tsy naharaka ireo mpandeha mihitsy izany ny andron’ny omaly, alatsinain’ny Paska, noho ny ankamaroan’ny mpandeha fa eo ihany koa ny fisian’ireo nanao fitaterana voatokana na “spécial”. Na dia izany aza anefa, dia nisafidy ny tsy nampiakatra ny saran-dalana ireo mpitatitra, ary niasa mandra-paharivan’ny andro, toa ny zotra 119, mampitohy ny 67ha-Ankatso.
Niakatra ny vidin-tsolika
Tsy vitsy ihany koa ireo manararaotra ao anatin’ny fankalazana fety tahaka itony. Tsikaritra izany tamin’ny fiakaran’ny vidin’ireo entana teny an-tsena, indrindra ny akoho amam-borona. Ity farany izay tena ankafizin’ny mpanjifa rehefa fety ny andro. Ho an’ny akoho izao, dia nahitana fiakarana 25 000 Ariary raha toa ka 45 000 Ariary ny gana, ary 85 000 Ariary miady varotra ny gisa. Mbola tsy nahitana fihenana ihany koa ny vidin’ny legioma. Isan’izany ny karaoty, voatabia izay 2 000 Ariary ny kilao, raha toa ka 2 400 Ariary ny kilaon’ny “haricot vert”, ary 1 400 Ariary ny kilaon’ny ovy. Fa ankoatra ny vidin’ny entana eny an-tsena, dia isan’ny nisongadina tamin’ity fetin’ny paska ity ihany koa ny fiakaran’ny vidin-tsolika, izay nihatra nanomboka ny 1 aprily lasa teo. Araka ny tatitra avy amin’ny minisiteran’ny Rano, ny angovo ary ny solika dia nahitana fiakarana 40 Ariary ny solika fandrehitra, ary 90 Ariary ny “gasoil” sy ny “super carburant”. Noho izany, lasa 2 440 Ariary ny litatra ho an’ny solika fandrehitra raha toa ka 3 370 Ariary ny “gasoil”, ary 4 020 Ariary ny “super carburant”.
Nandritra ny dian’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany Rosia izay mbola nitohy hatrin’ny omaly, dia fantatra izao fa nisy ny fihaonany tamin’ ny filoham-pirenena Rosianina Vladimir Poutine. Io fihaonana io izay niarahan’ny roa tonta niresaka mikasika ...Tohiny
Etazonia : Vonona hanohana ny fifidianana